သာလွန်ဇောင်းထက်| February 19, 2013 | Hits:9,989
10 | | ဖုန်းပြောနေသည့် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
Telenor နဲ့ Ooredoo အပြိုင်အဆိုင် ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးတော့မလား
6 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ဗာမန် February 19, 2013 - 9:07 pm	မြန်မာ အစိုးရသံရုံး ဝက်ဆိုဒ်တွေကိုကြည့်မလား၊ မြန်မာ အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာန ဝက်ဆိုဒ်တွေကို ကြည့်မလား။ ပုံ မလာ၊ ပန်းမလား ခန့် ငြားထည်ဝါမှု့ လုံးဝ မရှိပါ။ အလျှင်အမြန် ပြုပြင်မွန်းမံဖို့လိုအပ်နေပါပြီး။ ကျက်သရေ ရှိရှိ၊ ပီပီပြင်ပြင် ရှိဖို့ လိုအပ်နေပါပြီး။နိုင်ငံခြားမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ မြန်မာ အစိုးရ သံရုံးဝက်ဆိုဒ် တွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆင်အတန်း မှီဖို့သတင်းအချက်အလက်တွေကို အပတ်စဉ် တင်ဖို့ ၊ လျှောက်လွှာဖောင်၊ ဗီဇာ ဖောင်တွေကို တစ်နိုင်ငံ တစ်မျိုး မလုပ်ပဲ တစ်ပုံစံတည်း ကျက်သရေ ရှိရှိ PDF ဖိုင်ပုံစံလေးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီး။
Reply	Swe htwe February 19, 2013 - 10:50 pm	We want the reality ,not the lies.
Reply	Win Myint February 20, 2013 - 12:06 am	မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် e-Government ခေတ်ပြောင်းဖို့ ထက် လောလောဆယ် sim card ဈေးနှုန်းကို နှစ်သိန်းခွဲကနေ ၅ထောင်လောက် ကျအောင်အရင်ချပါ၊ လေသိပ်ပြီးမကြီးပါနှင့်။
Reply	win Swe February 20, 2013 - 2:55 am	“ဟုတ်ပါ့မလားမောင်ကာလုရယ်?”
Reply	ml February 20, 2013 - 3:33 am	အသစ်ဈေး၊ အကောင်းဈေးနဲ့ ဘက်ဂျက်တင်။
Reply	ွှ့thanwin February 20, 2013 - 5:32 pm	၇ာထူးလေးမြဲ ချင်တာနဲ့ ဒုတိယ၀န်ကြီးဦးဝင်းသန်း လည်းဘကြီးစိန်ကို ဖြီးနေပြီ။